Ipulatifomu Yokubuyekezwa Kwamabhizinisi Ngokuhlanganiswa Komphakathi: Xhuma
Sebenzisa izilinganiso zamakhasimende ngezibuyekezo ze-pluck
NgoMsombuluko, Julayi 2, 2012 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Abathengi abaku-inthanethi bakhetha ukwenza ibhizinisi nabathengisi ababathembayo, futhi nokwenza ngcono idumela lomkhiqizo kudinga ukugxila kakhulu kunoma yiluphi uhlelo lwezokuxhumana.
Ukubuyekezwa kwamakhasimende kuyindlela ejwayelekile futhi ehlolwe ngesikhathi yokwakha ukwethembeka komkhiqizo. Lokhu kubuyekezwa kufanele kukhombise okwenzekile nokuthembekile kwekhasimende elithengile futhi lazama umkhiqizo noma insizakalo. Kepha umbuzo wezigidi-dollar ukuthi ungalithola kanjani ithemba lokukholelwa ukuthi umbuyekezi empeleni uyikhasimende elihlinzeka ngokubuyekezwa okuyiqiniso, hhayi umthengisi ozifihla okhipha inkulumo-ze?
Ezinye izikhombisi zifaka:
Nikeza imininingwane mayelana nombuyekezi. Ngenkathi kungahle kungenzeki ukunikeza imininingwane yokuxhumana enemininingwane, idolobha nombuyekezi, kanye nedethi yokuthenga, kungaqinisa ukubuyekeza
Sebenzisa amandla ezinkundla zokuxhumana. Imibono yabangani, noma ngisho nabantu ongabazi abangoti ibalulekile.
Nikeza imininingwane kumathemba angabasiza ukuthi baqinisekise ukubuyekezwa - izifundo zocwaningo, imibhalo yezobuchwepheshe, amaphepha amhlophe njll.
Gqamisa izibuyekezo ezinhle kakhulu kanye nocwaningo oluhlobene nemidiya yakho yezenhlalo, bese uyiphonsa ngezingxoxo, izinhlolovo zemibono nezibuyekezo.
Abathengisi bangasebenzisa futhi amathuluzi afana Hlanganisa Ukubuyekeza, ipulatifomu yokubuyekeza ibhizinisi ehlanganiswe nomphakathi yokuqhuba ukuzibandakanya kunqubo.
Ukubuyekezwa kukaPlck ipulatifomu likhomba amakhasimende afanele futhi lifune impendulo yabo, libanikeze nezinketho zokulayisha izithombe namavidiyo futhi. Ipulatifomu lishicilela ngokuzenzakalela ukubuyekezwa eziteshini ezikhethwe ngaphambilini, futhi livumela amalungu omphakathi ukuthi athumele impendulo, ngaleyo ndlela aqale ukuqala ingxoxo yokuxhumana enganikeza imininingwane ethe xaxa kulokho okulindelwe. Umakethe ugcina amakhono wokuhlola ukuqinisekisa ukuthi konke kuhlala kulawula. Umbuyekezi uphinde athole inketho yokwabelana ngokubuyekezwa ku-Facebook, Twitter naku-LinkedIn.
Kodwa-ke, umbuzo wokuthembeka kokubuyekezwa uhlala. Ama-pluck's Izihlungi zeTrust, ithuluzi elinembile, lingasiza ngalokho. Izihlungi zeTrust zivumela ithuba lokubuka isibuyekezo ukubona kuphela ukubuyekezwa okulethwe yimithombo abayethembayo, efana nabangane babo be-Facebook, noma ochwepheshe ababahloniphayo. Kwabakhangisi, i-Pluck inikeza uhlelo lwemiklomelo oluhlanganiswe ngokuphelele oluzisiza ekuboneni nasekuhlanganiseni ukubuyekezwa kochwepheshe bemikhiqizo namanye amalungu anethonya umphakathi we-inthanethi ongahle uthembe.
Abathengisi noma kunjalo bangasebenzisa ukubuyekezwa kwe-Pluck ngezinhloso ezibanzi kunokumane njengethuluzi lokushicilela izibuyekezo ezithembekile. Isibonelo, ukuhlanganisa ukubuyekezwa kwe-Pluck ekhasini lomkhiqizo kuwebhusayithi, noma ngisho nakwenye indawo encane, kusiza ukuthuthukisa amazinga ezinjini zosesho.
Tags: ukubuyekezwa kwamakhasimendengcwengaukubuyekeza platform
Shayela Ukuzibandakanya namawijethi kusuka ku-Widgetbox